संस्मरण | मझेरी डट कम
Home › निबन्ध
राजविराज : मेरो सम्झनामा
editor — Sun, 11/22/2020 - 14:38
जीवन एक यात्रा हो, कर्मशील मानवले कर्तव्य पुरा गर्न यात्रालाई निरन्तरता दिनै पर्छ । यात्रा विनाको जीवन खल्लो तथा निरस हुन्छ । जीवनमा मैले धेरै यात्रा गरेको छु । २०५० देखि २०६५सम्मको मेरो जीवनको यात्राक्रम हालको २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम सप्तरी जिल्लामा भएको थियो । १५ वर्षदेखि गरेको यात्राका केही स्मरणहरू मेरो जीवनका अभिन्न अंग बने ।
अनाम पाठशालामा एकदिन
editor — Thu, 09/17/2020 - 18:35
तिमीले तिम्रो शैक्षिक विगतका बारेमा जान्न चाहेका रहेछौ । ढिलै भए आज लामो समयपछि तिमीलाई तिम्रो शैक्षिक विगतले आकर्षित गरेछ । खुसी लाग्यो । तिम्रा शैक्षिक विगतका बारेमा सम्पूर्ण कुरो त म पनि जान्दिनँ तर पनि स्मृतिको धमिलो चित्रमा अवशेषका रुपमा बाँकिरहेका केही भग्न इतिहासबाट सम्भव भएसम्मका विगत टिपेर पठाउँदै छु । तिमीलाई काम लागे प्रयास सफल भएको मान्नेछु ।
HomSuvedi — Wed, 02/12/2020 - 11:12
माघ २५ गते दिउसो बार बजेतिरको कुरा हो । एक साहित्यिक मार्यक्रममा थिएँ अचानक मोबाइलको रिङ्ग बज्यो । मैले सेभ नगरेको नम्बर रहेछ । अनि नाम देखिएन । यसैले मैले टेलिफोन उठाएँ र बोले-" हजुर !"
उताबाट केही आवाज ता आयो तर कार्यक्रममा अलिक कडा माइक बजेकोले सुनिएन । फेरि सोधें मैले- "को हो थाहा पाउन सकिनँ । एकै छिन पख्नु है ।" यति भनेर म अलिक आवाज कम आउने ठाउँमा गएर साेधें- "को बाेल्नु भो ?"
"म कुमार सि‌खडा सर ।" उताबाट आएको आवाज अहिले स्पष्ट सुने‌ं र बुझें पनि ।
"लाै, कसरी नि कताबाट तपाइँ ?"
भगवान घिमिरे — Thu, 01/30/2020 - 06:06
एक दिन आफ्नो सधैं घुमिरहने बगैंचामा एक युवती अर्थात् विद्यार्थीमाथि उसको नजरको वर्षा भयो । अनि छिनभरमै मानसपटलमा हलचल ल्याइदियो, अनि त कहाँ भेटुँ कहाँ देखूँ त्यो मनमा उर्लेर आएका भावनाहरुलाई कसरी पोखुँ जस्तो हुन थाल्यो ।
एक शिक्षकको एक बिहान
editor — Sun, 09/08/2019 - 17:40
०८ असोज, २०७५मा विहान ३:०० बजे नै आँखा खुले । शरीर कक्रेकै थियो । सायद नशा रोगी भएकाले नशा सक्रिय भएका थिएनन् । सकसले उठेँ र शौचकर्म सिद्धयाएँ ।
ओछ्यानमा पल्टिएँ । सुतिरहन मन लागेन । ध्यान मुद्रामा बसेँ र बुद्ध भजन सुन्न थालेँ । ७२ मिनेटको भजन अवधिभर त्यसमै हराएँ । अपूर्व आनन्दानुभूति भयो ।
आदरणीय स्व. रामकुमार शर्मा प्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
talakhu — Tue, 07/02/2019 - 17:56
स्व. रामकुमार शर्मा न्यौपानेको जन्म २०१० वैशाख ९ गते भोजपुर जिल्लाको गोगने गाउँमा भएको हो । वहाँको वाल्यकाल बिराटनगरमा सूर्यबहादुर थापाका ठाईंला भाइ स्व. देवेन्द्रबहादुर थापाको संरक्षणमा गंगादेवीले गर्नु भएको हो ।
स्व. रामकुमारले अध्ययनमा अर्थशास्त्र र नेपाली विषय लिएर बी.ए. गरी मास्टर अफ साइन्स इन रिर्सोस एसेसमेन्ट फर डेभेलोपमेन्ट ल्पानिङ्ग पढ्नु भई एप्रोस्क, राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्य, सि ए ए तथा कृषि विकास बैंकको महाप्रन्धक, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सल्लाहकार, कृषि मन्त्रालयको अधिकृतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो ।
HomSuvedi — Sat, 04/20/2019 - 11:26
कस्तो अचम्म !
केही वर्षअघि कुनै एक दिनको कुरा हो । बेलुकाबेलुका हुँदै थियो । म घरमा बाहिर खाटमा एउटा कुनै किताब पढेर बसिरहेको थिएँ । यसै बेला एक जना अपरिचित व्यक्ति घरमा आउनु भो र मलाई नै सोध्नुभो—
"होम सुवेदीको घर यही हो ?"
"हजुर हो हो यही हो । भन्नुहोस् । किन होला ?"
"किन नि, अब खाएपछि तिर्न जानेको छैन । हामीले पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । कसरी चलाउनु यसरी चारचार महिनासम्म उधारो खाएको पैसा नतिरेपछि ?"
"मैले बुझिनँ नि कुरा के हो ?"
"किन बुझ्नु पर्यो । खै तपाईंका बुबालाई बोलाउनु त अनि बुझ्नु हुन्छ ।"
मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा छँदा
HomSuvedi — Sun, 03/17/2019 - 11:32
म जगदम्बा प्रेसमा प्रूप पढ्ने जागिरे थिएँ, २०२९ देखि २०३८ सम्म । यस बिचमा धेरै साहित्यिकहरुसँग चिनाजानी भयो । विशेष गरी लीलाध्वज थापा, पुष्कर लोहनी, साम्बभक्त सुवेदी, दाताराम शर्मा, शङ्कर लामिछाने, शङ्कर कोइराला, म त लाली गुराँस भएछु अर्थात् क्षेत्रप्रताप अधिकारी आदि आदि ।
पर पर कताकताबाट नाता पनि पथ्र्याे भानुभक्त पोखरेलसँग, म उहाँलाई भिनाजु भन्थें । यसरी नाता नै पर्ने भानुभक्त पोखरेलसँग ता बनारसदेखिकै र अझ पाँचथरदेखिकै चिनाजानी थियो । उहाँसँग परिचित हुन पुस्तकालय नै कुरिरहनै परेन । यो सम्झना उहाँकै केन्द्रमा रहेको छ ।
editor — Sun, 01/20/2019 - 22:26
अचेल म सबेरै सुत्ने र विहान सबेरै उठ्ने गरेको छु । डाक्टरहरूले दिएका सल्लाहलाई देववाणी ठान्ने गरेको छु । दाहिने हात कुप्रियाएर र दहिने खुट्टा बङ्ग्याएर भए पनि विहान–बेलुका खाली पेट १/१ घण्टा हिँड्ने गरेको छु । जोडजोडले श्वास फ्याल्न र नाक समाएर श्वास लिन र फ्याक्न लगाएका छन् । डाक्टर र साधकहरू त्यस क्रियालाई कपालभाति र अनुलोमविलोम प्राणायामभन्दा रहेछन् । गलत हो कि सही हो, म भने हरियो दुबोमा खाली खुट्टाले हिँड्दै र प्राणायाम गर्दै गर्ने गरेको छु । यसो गर्दा तोकिएभन्दा बढी समय पनि दिन सक्छु । बसेर प्राणायाम गर्न २ मिनेट पनि सक्तिनँ ।
editor — Sat, 11/24/2018 - 02:21
गुरुबा नमस्कार है !
यसरी नै उहाँलाई भेट्न बिहान बेलुकै निकै मान्छेहरू आइरहन्थे। केटाकेटीको लागि उहाँ देउताजस्तै हो भन्थे। खासमा उहाँलाई केटाकेटी उमेरमै देउता आएका थिए रे, धेरै पहिला ! हामीलाई त्यो थाहै छैन। जोखाना हेर्ने, झारफुक गर्ने र दबाई दिने उहाँको दैनिकीको अभिन्न अङ्ग थियो। तन्त्रमन्त्रमा शक्ति हुन्छ, हुन्न ? बहस गर्न सकिन्छ तर उहाँले तन्त्रमन्त्रको साथ अमूल्य जडिबुटीबाट उपचार गर्नुहुन्थ्यो र त्यो एकदमै प्रभावकारी, लाभदायक थियो भन्नेहरू मैले गाउँघरमा यत्रतत्र भेटेको छु।
फुक्काफाल जिन्दगी, मनमौजी दशैं
editor — Fri, 10/19/2018 - 16:23
स्मृति र विस्मृतिका मधुर सुनामीमा फँसेको छु-म यतिखेर।
म बीसको दशकमा मोरङमा जन्मिएको हुँ। औंलाको तरानले भर्खरभर्खर मुक्ति पाएका बेला पहाडबाट मधेश झरेका बूढापाकाहरू ऊ बेलामा भन्थे, ‘मोरङमा एक रूपैयाँको अन्नले बाँचुन्जेल खान र मरेपछि किरिया गर्न पुग्छ।’ यसो किन भनियो होला? पछिसम्म पनि गहिरिएर सोच्थेँ, म।
अलविदा, माङ्‍कोडे दाइ
केशव बोहोरा — Mon, 10/08/2018 - 09:36
माङ्‍कोडे दाइ हामी सबैका लागि अगम्य थिए । बुझ्‍नै कठिन पर्ने एक व्यक्ति । उनलाई हामीले जसरी चिन्थ्यौँ, त्यो त फगत बाह्‍य थियो । भित्र उनी अर्कै थिए । उनको विगत कसैलाई पनि थाहा थिएन । उनी आफैं पनि त्यो बताउँदैनथे । जे होस् उनी हामी बालबालिकाहरूका माझ चर्चित थिए । उनका धेरै विशेषताहरू थिए । ती मध्ये केही यस्ता थिएः
दुई छाक खानाको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिदिन्थे ।
बिमारीको बिहान एक घण्टा
editor — Sun, 09/30/2018 - 23:06
०८ असोज, २०७५मा विहान ३ः०० बजे नै आँखा खुले । शरीर कक्रेकै थियो । सायद नशा रोगी भएकाले नशा सक्रिय भएका थिएनन् । सकसले उठेँ र शौचकर्म सिद्धयाएँ ।
HomSuvedi — Sat, 09/22/2018 - 18:02
म यसरी घरमै पढेर अलिक माथिल्लो तहको भइसकेको भए पनि सबै साथीहरुले पढ्ने पाठशालामा जान नपाएकोमा दिक्क मान्दोरहेछु क्यारे । अरु अरु साथीहरुका हातमा चित्रसहितको ‘ठूलो वर्णमाला’ को किताब देखेर मलाई लोभ लाग्थ्यो ।
editor — Mon, 09/17/2018 - 01:03
म सानै छँदा छिमेकी समकालीन बालबालिकाहरू स्कुल गएको देख्दा मलाई पनि सुकिलो लुगा लगाएर, झोलामा किताब, कापी, पाटी, खरी बोकेर उनीहरूसँगै जान मन लाग्थ्यो । मुमालाई ‘मलाई पनि स्कुल पढ्न मन छ । स्कुल पठाइदिनूस् न’ भनेर दिनदिनै पिरोल्थेँ ।
कस्तो भाग्य रहेछ
यो कथा मेरो आफ्नै खलोको कथा हो
लघुकथा रचना प्रकृया (अनुदित लेख)
पुतली युद्धकी ढाल
मेरो गाउँको धारो
अतीथहरु इतिहास बन्छ
बेलायतमा उत्तरआधुनिक विमर्श
नेपाली कविता: बार्दलीमा खुर्सानीको बोट
कस्तो भाग्य रहेछ मेरो
गणेशध्वजबाट प्रेमध्वज भएँ
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि
एक्लै बोल्ने बानी
पर्ख आमा एउटा म निकास लिई आउँछु
खडेरी परेको सपना को देश
यो जिन्दगीको के कुरा
बुबाको शिर र सगरमाथ,........